Ụfọdụ m tinye-ons na uzo ma ọ bụ na agba ntụ (na-enweghị udidi). Kedu ihe m kwesịrị ịme ? (FSX SP2 / osooso)
Ihe dị oké mkpa, mgbe ị nwere ihe dị tinye-na nke 3D nlereanya e kere maka FS2004 ma-eji na FSX SP2 (na-akpọ Port N'ime), bụ deactivate Preview DirectX 10 na ntọala nke FSX. N'ezie, FS2004 addons na-adịghị dakọtara na DirectX 10.
Atụ 1: A akụkụ nke ụgbọelu-apụghị ịhụ anya.
Atụ 2: The nku ma ọ bụrụ na ụgbọelu na-adịghị ahụ anya.
Atụ 3: The ụgbọelu bụ kpamkpam na agba ntụ, na-enweghị udidi.
The ngwọta: Deactivate DirectX 10 preview.